360 Dog Washing Viral
အိမ်မွေးခွေးများ ရေချိုးမယ်။ ချစ်စရာ အိမ်မွေးခွေးလေးများကို ၃၆၀ ပတ်လည် ရေချိုးပေးနိုင်မယ့် ရေချိုးဂွင်းလေးများကို Rocket တွင် ရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆပ်ပြာထည့်ရန် ခွက်လေးလည်း ပါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်က ရေပိုက်နဲ. အသင့်ချိတ်နိုင်ဖို. အပေါက်လည်း ပါရှိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ရေပိုက်တော့ မပါပါဘူး။ ရေအတိုးအလျော့ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အိမ်မွေး ချစ်စရာလေးများကို လွယ်ကူစွာ သန်.ရှင်းရေး ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက ဖုန်းလေးသာ ဆက်လိုက်ပါ။ ဈေးနှုန်း - 19000 (instock now) Delivery free in Yangon မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးများ အိမ်အရောက် ၃ထောင် တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male Operator) 09784419691 (Female Operator) 09961127000 ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Asepso (အဆပ်ဆို) လက်ဆေးဆပ်ပြာအရည်
Asepso ချစ်​သူပရိတ်​သတ်​​ကြီး​ရေ ​ပြောလိုက်​အုံးမယ်​ ခုတ​လောဟစ်​ထ​နေတဲ့​ရောဂါဆန်း​ကြောင့်​ လူ​တွေက Hand Gel (​ရေမလိုလက်​သန့်​​ဆေးရည်​) ကိုပိုအသုံးများလာကြတယ်​​ပေါ့​နော်​ တကယ်​လည်းသုံးသင့်​ပါတယ်​ တခုသတိထားရမှာက​တော့ Hand Gel ဆိုတိုင်းလည်းသုံးလိုက်​လို့မရပါဘူး အဓိက #ဘက်​တီးရီးယားပိုးကို​သေ​စေနိုင်​တဲ့ Antispecial gel တို့ soap တို့ကိုသုံး​ပေးသင့်​ပါတယ်​ ဒါမှသာ အန္တယ်​ရယ်​လည်းကင်း ​ငွေကုန်​သက်​သာရလည်းနဲမှာပါ လို့သတင်း​ကောင်း​ပေးလိုက်​ချင်​ပါတယ်​
တစ်ခါသုံး မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Micro Touch One လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ အိမ်မှာ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး မုတ်ဆိတ်ရိတ်ရန် အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ဓားအိမ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဆေး သန်.ရှင်း ရတာ လွယ်ကူပြီး အသုံးပြုပြီး ဓားများကိုလည်း လွယ်ကူစွာ ဆေးကြောနိုင်ပါမယ်။ ဓားပို ၁၂ချောင်းလည်း ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက အလွယ်တကူ အပြင်မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသေးတယ်။ ဈေးနှုန်း - ၂သောင်းကျပ် Delivery free in Yangon မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို.ခ ၃ထောင်ကျပ်ပါ။ အမျိုးသားတို.အတွက် တခြားအသုံးဝင် ပစ္စည်းများ ကြည့်ရန် http://www.rocketonlineshopping.com/category/men/ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 09784419691 09961127000 ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Bella SkinLine Set (Facial Health Care)
STEP 1(Power Whitening &Deep Cleansing Facial Cleanser ) SkinLine Power Whitening &Deep Cleansing Facial Cleanser သည်အထက်ပါဖေါ်ပြမှုများကို သက်သာစေပါသည် ။ ၎င်း၏သေးသွယ်သော မျက်နှာသန့်စင်အစေ့သည် အရည်ပြားချွေးပေါက်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်စေပြီး ချွေးပေါက်အတွင်း အဆီ၊အညစ် အကြေးနှင့် ကျန်ရှိအရာများကို လုံးဝသန့်စင်စေပြီး အရည်ပြားကို ပုံမှန် အသစ် ပြန်လည် အစွမ်းရှိလာစေသည်။၎င်း၏မျှတမူနှင့် အရက်ပြန် ပါဝင်မှုမရှိသောကြောင့် အရေပြားဖွဲ့စည်းမှုကို လုံးဝမထိခိုက်စေပါ။ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် SkinLine Power Whitening & Deep Cleansing Facial Cleanser တွင်ထူးခြား သော Power Whitening ပေါင်းစပ်ပါဝင်မှုကြောင့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အရေပြားဆဲလ်ထဲအထိ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း ကြောင့် အသားရေကို ပိုမိုဖြူစင်စေပါသည်။ Step2(Power Whitening & Hydrating Facial Toner) SkinLine Power Whitening & Hydrating Facial Toner ၏အဓိကအစွမ်းသည်အရေပြားသန့်စင်မှု ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေပြီး အထူးသဖြင့် မျက်နှာ၏အိုမင်းသွားသော ဆဲလ်များကို နိုးဆွပြီး ဆဲလ်အသစ် ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တချိန်တည်းတွင် ချွေးပေါက်ကျဉ်းခြင်းအစွမ်းရှိကာ အရည်ပြားကို ချောမွတ်ရှင်းလင်းမှုကို ခံစားရပြီး ၎င်း၏Hydrating အစွမ်းသည်အတွင်းပိုင်း အထိ ဝင်ရောက်ပြီး အရေပြားကို စိုစွတ်စေကာ ရေဓါတ်ဖြည့်ပေးနိုင်ခြင်းသည့်အတွက်ပိုမိုတောက်ပစေနိုင်ပါသည်။ SkinLine Essential Hydrating Facial Toner သည်တကယ့်ကို မရှိမဖြစ်သော အဆင့်မြင့်အလှကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ STEP3(Power Whitening & Moisturising Facial Day Cream) Power Whitening & Moisturising Facial Day Cream သည် အဆင့်မြငိ့အရညိအသွေးမြင့် ပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး နေလောင်ဒဏ်ခံနိုင်သော အရေပြားတွန့်ခြင်း မှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။၎င်း၏ Phenylflavonoid ဖော်စပ်မှုသည် SPF 30+++ နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးနေရောင်ခြည်၏ပူလောင်သော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်A&B (UVA & UVG) ထိခိုက်မှုကိုခုခံကာကွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းမှတဆင့် အသားရည်ကို ဖြူစင်နုပျိုစေခြင်း၊အစိုဓာတ်ကို အတွင်းထိ အားဖြညိ့ပေးနိုင်သော အာနိသင်များရှိသောကြောင့် ကြာရှည် စွာ အသားအရေကိုရေဓာတ် ကုန်ခမ်းမှုကိုကာကွယ် ထိန်းသိမ်းပေးထားပါသည်။ ဆဲလ်များကိုနိုးဆွပြီး ရှင်သန်စေကာ အရေပြားများတွန့်ခြင်း အိုမင်းခြင်း မလွယ်ကူပါ။ ထိုမှတဆင့် အရေးအကြောင်းများ ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်းများ လျော့နည်းစေပါသည်။ ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုပါက အသားအရေသည် ပိုမို ဖြူစင်တောက်ပသော အသားရေကို ပိုင်ဆိုင်လာပါလိမ့်မည်။ အထက်ပါ ၃မျိုးပါ တစ်set အားအသုံးပြုရုံဖြင့် သိသိသာသာပြောင်းလဲလှပလာမှုကိုလက်တွေ့တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အလယ်မှာ သံပေတံအသေးပါတဲ့ ခါးမနာ ပုံသစ်လေးကို Rocket တွင် ဝယ်နိုင်ပါပြီ။ ဈေးနှုန်း - ၂သောင်းကျပ် (free size) Delivery free in Yangon မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို.ခ ၃ထောင်ကျပ်ပါ။ တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်လိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber 09961127000 (Office) ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းမဆက်လိုသူများအတွက် Order form https://order.moby.asia/Order?sId=eaftak9Y83U7mNyPYdzrdA%3D%3D Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Boy or Girl Tester
ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာပ်ါမှာနည်းပညာတွေ၊ဆေးပညာတွေအစရှိတဲ့ ပညာတိုင်းလိုလိုဟာနေ့စဉ်နှင့်အမျှတိုးတက်လို့နေပါတယ်။ ထိုတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာရင်သွေးရတနာလေးတွေကိုလွယ်ထားရတဲ့မေမေတို့အတွက် ဆေးရုံဆေးခန်းသွားစရာမလိုပဲ၊လအကြာကြီးစောင့်စရာမလိုပဲ သားသားလားမီးမီးလားဆိုတာကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာသိနိုင်တယ် ဆိုရင်ယုံနိုင်ပါ့မလား?။ သားသားလားမီးမီးလားဆိုတာသိရဖို့အတွက်လအကြာကြီးစောင့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဆေးရုံဆေးခန်းဝေးသူတွေ၊ဆေးရုံဆေးခန်းမှာultrasondရိုက်ဖို့တန်းစီပြီး ထိုင်မစောင့်ချင်သူတွေအတွက်Quickly Makerလေးရောက်ရှိလာပါပြီ။ ကိုယ်ဝန်၅ပတ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သားသားလေးမီးမီးလေးဆိုတာကို အလွန်ဆုံးအချိန်နှစ်မိနစ်၊သုံးမိန်စ်အတွင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။ ၉၉%သေချာတဲ့အဖြေရနိုင်ပါတယ်။မေမေတို့ရဲ့ဆီးကိုစစ်ဆေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆိုးကျိုးမရှိပါယုံကြည်စ်ိတ်ချစွာစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးမှထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရရှိလာတဲ့ အဖြေကိုစိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါတယ်။ website ကြည့်ရန် http://www.quicklymaker.com/ နယ်မှမှာယူလိုသူများကားဂိတ်အထိပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းအိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဈေးနှုန်း - 25000 kyats Delivery free in Yangon ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber 09768484878 ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
သံ အိပ်ထ မတ်တင် မကြိုက်သူများအတွက် ရာဘာ အိပ်ထ မတ်တင် ကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပါပြီ။ Gym သွားစရာမလို အားကစား ကြိုးဆွဲလေးဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပုံဖော်နိုင်ပါပြီ။ ဗိုက်ခေါက်ထွက်နေလိုစိတ်ညစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများလည်း အဆင်ပြေစေပါမယ်။ လက်မောင်းတွဲကျနေတာကိုလည်း လှပစေမယ် ပေါင်သားများလည်း လှပစေမှာ ဖြစ်သလို ပုံမှန် ဆော့ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းမွန်စေပါမယ်။ တစ်ရက်မီနစ် ၃၀သာလုပ်ပေးဖို.သာ လိုအပ်မှာပါ။ အံသြလှပသွားမယ်ရှင့် အမောဖောက်သူများ ခါးနာသူများ လည်း လေ့ကျင့်ခန်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၁၀၀၀၀ ကျပ် (ကြိုးနှစ်ချောင်း) ၁၇၀၀၀ ကျပ် (ကြိုးလေးချောင်း) Delivery free in Yangon မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို.ခ ၃ထောင်ကျပ်ပါ။ တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber 09961127000 (Office) ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းမဆက်လိုသူများအတွက် Order form https://order.moby.asia/Order… Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket…
Ultra Slim Wrist Watch Blood Pressure Monitor
- iPhone (iOS) နှင့် Android ဖုန်းမျိုးစုံကို Bluetooth ချိတ်၍ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း - ဖုန်းများတွင် Memory မှတ်နိုင်ခြင်း နှင့် ဆရာဝန်များထံသို့SMS, E-mail Report များ ပေးပို့နိုင်ခြင်း - Ultra Slim ဖြစ်သောကြောင့် ခရီးဆောင်အဖြစ် သုံးနိုင်ခြင်း - စားပွဲတင်နာရီအဖြစ် Alarm4Nos အထိ သုံးနိုင်ခြင်း၊အခန်းတွင်း အပူချိန်ကိုလည်း ပြသနိုင်ခြင်း - W.H.O Indication (အနီ / အ၀ါ / အစိမ်း) ပြသခြင်း - Color Bar Indication (အရောင်ဖြင့် ပြသသောကြောင့် အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်ခြင်း) - Date &amp; Time ပါခြင်း - Multi-User X2(20 Memories for Each) - Blood Pressure &amp; Pulse shown at the same time (သွေးပေါင်အတက်အကျ နှင့် နှလုံးခုန်နှုန်းကို တပြိုင်တည်း ပြသခြင်း) - Irregular plus detection (တိုင်းတာနေစဉ် အနေအထား မှန်/မမှန် ပြသခြင်း) - Low Battery Indication ပြခြင်း - အခန်းတွင်း အပူချိန်ကိုလည်း ပြသနိုင်ခြင်းAuto Power Off ပါသောကြောင့် Power Saving ဖြစ်ပါသည် - Display-Color LCD Jumbo Display (LCD Color မျက်နှာပြင် အလွန်ကြီးမားခြင်း) - Colored Back Light System (အခြားစက်များနှင့် မတူပဲ မျက်စိကို အေးမြစေပါသည်။) - Liquid Crystal Display ဖြင့် ပြသသောကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ မြင်ရပါသည် - Battery-Li-Battery ဖြစ်၍ ဓာတ်ခဲလုံးဝ မလိုအပ်ပဲ Micro USB Plug ဖြင့် အားသွင်းနိုင်ခြင်း - Power Saving ပါခြင်း-Auto Power Off ပါသောကြောင့် Power Saving ဖြစ်ပါသည်။
Multi-user Upper Arm Blood Pressure Monitor
Display -	Color LCD Jumbo Display (LCD Color မျက်နှာပြင် အလွန်ကြီးမားခြင်း) -	Colored Back Light System (အခြားစက်များနှင့် မတူပဲ မျက်စိကို အေးမြစေပါသည်။) -	Liquid Crystal Display ဖြင့် ပြသသောကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ မြင်ရပါသည်။ Battery -	Battery (or) AC/DC Adapter ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ -	Low Battery Indication ပြခြင်း -	Power Saving ပါခြင်း Function -	W.H.O Indication (အနီ / အ၀ါ / အစိမ်း) ပြသခြင်း -	Color Bar Indication (အရောင်ဖြင့် ပြသသောကြောင့် အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်ခြင်း) -	Date &amp; Time ပါခြင်း -	Multi-User X2(50 Memories for Each) -	Blood Pressure &amp; Pluse shown at the same time ( သွေးပေါင်အတက်အကျ နှင့် နှလုံးခုန်နှုန်းကို တပြိုင်တည်း ပြသခြင်း) -	Irregular plus detection (တိုင်းတာနေစဉ် အနေအထား မှန်/မမှန် ပြသခြင်း) -	Auto Power Off ပါသောကြောင့် Power Saving ဖြစ်ပါသည်။
Infrared Thermometer ( Ear &amp; Forehead Thermometer )
Function -	1 Second Time Response in ear use ( နားတွင်းအပူချိန်ကို တစ်စက္က္ကန့် အတွင်း တိုင်းတာနိုင်ခြင်း) -	5 Seconds Time Response in Forehead use (နဖူး အပူချိန်ကို ငါးစက္က္ကန့် အတွင်း တိုင်းတာနိုင်ခြင်း) -	Beeper/ Fever Alarm (အဖျားရှိလျှင် အသံပေးစနစ်ပါခြင်း) -	ံC/ံF ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း -	Low Battery Indication ပြခြင်း -	Memory များကို မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခြင်း -	Auto Power Off ပါသောကြောင့် Power Saving ဖြစ်ပါသည်။ Display -	Liquid Crystal Display ဖြင့်ပြသသောကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ မြင်ရပါသည်။ Battery -	Power Saving ပါခြင်း
Body Temperature Digital Thermometer
- 10 Sec fast Read -	ံC/ံF ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း - Water Proof (ရေစိုခံနိုင်ခြင်း) - Memory (အဖြေများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း) - Beeper / Fever Alarm (အဖျားရှိလျှင် အသံပေးစနစ်ပါခြင်း) - Flexible Tip (ကွေးညွတ်နိုင်ခြင်း) - Jumbo LCD ( LCD မျက်နှာပြင်ကျယ်ခြင်း) - Fever Teller Backlight (နီ၊ဝါ၊စိမ်း color ဖြင့်အဖျားရှိ/မရှိပြသခြင်း) - ဓာတ်ခဲအသစ် လဲလှယ်နိုင်ခြင်း(အကြိမ် ၂၀၀၀ အထက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း) စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ခေတ်သစ် နား ကလော်တံ
ဓာတ်ခဲမလို ရာဘာ အပျော့နဲ. နာကျင်မှု မရှိ အလွယ်တကူ နားကလော်နိုင်မယ့် ခေါတ်သစ် နားကလော်တံလေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ ရာဘာ အပျော့နဲ. ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်လို. နာကျင်မှု ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး အသုံးပြုပြီးရင် လည်း ရေဆေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ခေါင်းပို ၁၆ချောင်း ပါရှိပြီး လှည့်လှည် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဈေးနှုန်း - ၁၂၀၀၀ ကျပ် Delivery free in Yangon မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးများအားလုံး ပို.ခ ၃ထောင်ကျပ် တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက ဖုန်းလေး ဆက်ပေးပါ။ 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber 09961127000 (Female) Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
Function -	1 Second Time Response (တစ်စက္က္ကန့် အတွင်း တိုင်းတာနိုင်ခြင်း) -	Beeper/ Fever Alarm (အဖျားရှိလျှင် အသံပေးစနစ်ပါခြင်း) -ံC/ံF ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း -	W.H.O Indication (အနီ / အ၀ါ / အစိမ်း) ပြသခြင်း -	Memory များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းပါခြင်း -	Auto Power Off ပါသောကြောင့် Power Saving ဖြစ်ပါသည်။ -	Low Battery Indication ပြခြင်း Display -	Liquid Crystal Display ဖြင့် ပြသသောကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ မြင်ရပါသည်။ -	Colored Back Light System (အခြားစက်များနှင့် မတူပဲ မျက်စိကို အေးမြစေပါသည်။) Battery -	Power Saving ပါခြင်း
ထိုင်ရာ သက်သာစေမယ့် ကူရှင် (PreOrder)
ရုံးအထိုင်များမဲ့ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်တို.အတွက် Management အရမ်းများပြီး အထိုင်များမဲ့ မိတ်ဆွေတို.အတွက် အဆင့်မြင့် ကျောင်းကြီးတွေမှာ ကွန်ပျူတာနဲ. ပညာသင်ကြားရသူများအတွက် အထိုင်များတဲ့ အလုပ်ထဲမှာ သက်သာရာ ရစေမယ့် အထိုင်ကူရှင်လေးကို Rocket တွင် ဝယ်လို. ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကူရှင်ထဲမှာ Coccyx Orthopedic ကို ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် ထိုင်ရတာ သက်တောင့် သက်သာ ရှိစေမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 100% Polyester နဲ. ပြုလုပ်ထားသဖြင့် လျော်ဖွတ်လို. ရမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပန်းရောင်တစ်မျိုးတည်းလာတဲ့အတွက် အမျိုးသမီးများနဲ. ပိုမိုသင့်တော်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်း 39000 kyats Deliver free in Yangon (PreOrder) ၂ပတ်စောင့်ရပါမယ်။ ရန်ကုန်မြို.ပြင် = ၂ထောင်ကျပ် နေ.ချင်းအမြန် = ၂ထောင်ကျပ် မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးအားလုံး အိမ်အရောက် ၃ထောင်ကျပ် တခြား မြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...